ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၊မစ္စတာ ဂန္ဓီနှင့်မစ္စတာ ဂျင်နားတို့ (၃) ဦး | Danya Wadi
»အထူးကဏ္ဍ»ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၊မစ္စတာ ဂန္ဓီနှင့်မစ္စတာ ဂျင်နားတို့ (၃) ဦး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၊မစ္စတာ ဂန္ဓီနှင့်မစ္စတာ ဂျင်နားတို့ (၃) ဦး
Posted by danyawadi on February 19, 2013 in အထူးကဏ္ဍ, ပေါ်လစီ, Photos
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အမှတ်တရ(For Remembrance Of General Aung San)‘s photo.
ဒီပုံကတော့ ထုံးစံအတိုင်းရှားပါးပါဘဲ။ပုံထဲမှာပါတာကတော့ Great တွေချည်းမလို မည်သူတွေဆိုတာ ရေးပြနေစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။။ဒီ ပုံလေးလဲ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ သူတွေ ရှိနေသေးလို့ ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဒီ ပုံလေးကို ပို့ပေးတဲ့ ကျွန်တော့ Page ရဲ့ ပင်တိုင် Member တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အစ်ကို Aung Ko ကို Member များကိုယ်စား ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။
← ရခိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ မတ်လကုန်တွင် ထွက်ရှိမည်
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၁) →